Chelsea oo rajo ka qabta in uu la sii joogo Lampard
Home Sports Chelsea oo rajo ka qabta in uu la sii joogo Lampard
Kooxda Chelsea ayaa wadahadal kula jirta Frank Lampard , waxaana ay sheegtay maanta oo Arbaca ah in ay la kordhin doono heshiis-ka uu xidiggan kula joogo kooxda.
Isu duwaha guud ee kooxda Ron Gourlay ayaa laga soo xigtay isagoo leh 34-jirkan meelna ugama socda Chelsea, waxaana u yaboohnay heshiis cusub, maadama uu ku egyahay heshiis-kiisa dhammadka xilli ciyaareedka hadda socda.
Si kastaba, Chelsea ayaa la sheegay in aysan ku qanacsaneen xiddigga reer England qaab ciyaareedka uu soo bandhigay xilli ciyaareedka hadda socda 2012/13.
“Waxaa noo socda wadahadal Frank Lampard. Laakin waa ku kal soonahay in ay wax ka soo baxaan,” Gourlay ayaa u sheegay wargayska The Mirror.
Lampard ayaa la aaminsan yahay in 12-year sanno la joogay kooxda ka dhisan Stamford Bridge, waxaana uu ka mid yahay xidiggaha kooxda qaranka England u matali doona tartanka kubadda cagta adduunka 2014 FIFA World Cup ee ka dhacaya dalka Brazil,
202-gool ayuu dhaliyay intii uu la joogay kooxda Chelsea.